Ungawulawula njani umxholo weTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungawulawula njani umxholo we-twitter?
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 290
Naliphi na iakhawunti ye-twitter ineentlobo zonke zeetweets ezineentlobo ezahlukeneyo zomxholo, ukusukela kwiimemes ezidumileyo ukuya kwiividiyo. Uninzi lweenjongo zokuzonwabisa. Ukuze uqwalasele lo mxholo, kuya kufuneka wazi ezinye iindlela onokubonelelwa ngazo yi-twitter.
Ngoluqwalaselo, i-twitter ayikuvumeli kuphela ukuba uqwalasele umxholo wakho Imultimedia, ikwasebenzisa olu seto ukuphucula amava abanye abasebenzisi xa bekhangela umxholo.
Kwelinye icala, ngale nto, unokucoca iziqulatho eziqwalaselweyo Ubuthathaka okanye ongafanelekanga
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ungene kwiakhawunti yakho
Yiya kwi "ezinye iinketho" icon kwaye emva koko uye "kuseto kunye nemfihlo", Ukusuka kwimenyu yasekhohlo yojongano oluphambili lweakhawunti yakho. Ukuba usebenzisa i-app ye-twitter, kuya kufuneka ucofe kwifoto yakho yeprofayile ukusuka kumda wexesha ukufikelela kweli candelo.
Kweli candelo kufuneka ufake "ubumfihlo nokhuseleko".
Apha uza kubona icandelo "umxholo owubonayo". Apha uya kuqwalasela imixholo kunye nokhetho lweakhawunti yakho.
Kweli candelo uza kufumana la macandelo alandelayo:
Msgstr "Bonisa umxholo wemultimedia onokuba nezinto ezinobuzaza."
"Imixholo". Kule nxalenye unokukhetha imixholo eya kuthi isetyenziselwe ukwenza ii-tweets zakho, kunye neziganeko kunye nezaziso eziza kuboniswa yi-Twitter kwiprofayili yakho.
Uyakwazi ukubona uluhlu lwezihloko eziphakanyisiweyo, ongazilandeli Ukucinezela i-X ebonakalayo nganye nganye.
"umdla". Uya kubona uluhlu lwezinto ezinomdla eziphawuliweyo, kuba inkqubo ye-twitter igqibe ukuba ziyahambelana nezinto ozithandayo ngokweprofayile yakho, izihloko ozilandelayo kunye neetweets zakho. Funda, ujonge kwaye ungakhangeli ezo uziqwalaseleyo.
"Khangela iZicwangciso." Apha unokumakisha indawo okuyo kwaye wenze ngokwezifiso iintsingiselo ngokuguqula indawo okuyo.
Okokugqibela, uya kubona "Phendla izicwangciso" ukuvumela inkqubo ukuba ifihle umxholo onokwenzakalisa ubuntununtunu benkampani yesithathu kwaye ucime ezo akhawunti bezithintelwe okanye zivalwe nguwe
Kwenzeka ntoni xa umxholo wemultimedia yeprofayile yakho iqulunqiwe?
Abasebenzisi abangena kwiprofayile yakho banokubona umyalezo osisilumkiso malunga nomxholo abaya kuwufumana kwiakhawunti yakho. Ngokukodwa xa kuziwa kumxholo obuthathaka, ke inkqubo iya kucela uqinisekiso lokujonga kwakho.
Nje ukuba ndisete umxholo wam, ngaba ndingabelana ngomxholo obuthathaka?
Iakhawunti yakho inokuxelwa ngokwabelana nolu hlobo lomxholo. Ke iqonga le-twitter liya kuhlalutya umxholo. Ukuba iqukumbela ukuba ayifanelekanga kwaye ayiboniswanga xa kufakwa umxholo onobuzaza, iakhawunti yakho inokufumana isohlwayo.
Ukususwa komxholo wemultimedia, nokuba ngumfanekiso okanye ividiyo.
Phawula umxholo wemultimedia njenge- "sensitive". Umxholo uya kubonisa isaziso kubasebenzisi abafuna ukufikelela kuwo.
Ngeempazamo eziphindaphindiweyo kwimigaqo ye-twitterUmzekelo, imifanekiso yeprofayile okanye ii-headers ezibonisa umxholo ongafanelekanga, iakhawunti yakho inokungasebenzi okwethutyana.
1 Inkqubo yokumisela
2 Kweli candelo uza kufumana la macandelo alandelayo:
3 Kwenzeka ntoni xa umxholo wemultimedia yeprofayile yakho iqulunqiwe?
Uyifumana njani kwakhona iakhawunti yam yocingo?
Uvale njani iakhawunti ye-twitter?